Madaxweyne Farmaajo oo Kulan La Qaatay Shiikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan – Radio Daljir
Abriil 11, 2017 4:48 b 0
Madaxweynaha dowlada Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo oo booqasho ku jooga dalka Imaaraatka carabta ee Midoobay ayaa kulan la qaatay Shiikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan oo ah dhaxal sugaha Imaarada Abu Dhabi ahna abaanduulaha ciidamada milateriga dalkaas.
Kulankan oo ka dhacay qasriga Al-baxr ee Magaalada Abu Dubai ayaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab.
Wakaalada wararka ee dalka isutaga Imaaraatka carabta oo baahisay warkan ayaa intaa ku dartay in madaxweyne Farmaajo uu soo bandhigay qorshihiisala xiriira la dagaalanka argagaxisada iyo dedaalka ay dowladiisu ku dooneyso xaqiijinta amaanka dalka.
Farmaajo ayaa dowlada imaaraatka carabta uga mahad celiyey taageerada dhinac walba leh ee ay la garab joogto shacabka Soomaaliyeed iyo mashaaricda ay dalka ka wado.
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa isna balan-qaaday in Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ay sii wadi doonto taageeridda walaalaha Soomaaliya, ayna ka caawin doonto dib u dhiska hey’adaha qaran si loo taageero amniga iyo horumarka dalka.
Dhanka kalena Sheekh Maxamed ayaa waxa uu xusay iney kaalin weyn ka qaadan doonaan gurmadka loo sameynayo dadka ku tabaaloobay abaaraha ka jira Somalia, isagoo shacabka Soomaaliyeed u rajeeyey inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatada.
Masuuliyiin ka tirsan labada dhinac ayaa ka qeyb galay kulankan, waxaana madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa la geeyey masjidka weyn ee Shiikh Zayed bin Suldan Al-Nahyan iyagoo soo siyaartay qabrigisa wuxuuna ahaa asaasihii dowlada imaaraatka Carabta.